Lexar JumpDrive Iweghachite: Naghachi Lexar JumpDrive File na ala
1 Flash Drive Atụmatụ
1.1 USB flash mbanye
1.2 Flash mbanye nha
1.3 Flash mbanye ụdị
1.4 Flash mbanye Mac
2 Special Flash draịva
2.1 ezoro ezo flash mbanye
2.2 Secure flash mbanye
Ma gụọ 2.3 Flash mbanye idozi
2.4 Gụọ nanị flash mbanye
2.5 Terabyte flash mbanye
3 Nsogbu na Nchọpụta nsogbu
3.1 Flash mbanye adịghị ghọtara
3.3 nkebi flash mbanye
3.4 emerụ flash mbanye
3.5 Naghachi Windows System na USB mgbake
4 Flash mbanye mgbake
2.1 Naghachi furu efu faịlụ site na pen mbanye
2.2 USB flash mbanye mgbake
Ma gụọ 2.3 Naghachi flash mbanye Mac
2.4 Flash mbanye mgbake ngwá ọrụ
2.5 Naghachi ehichapụ faịlụ site USB flash mbanye
2.6 PNY attache flash mbanye mgbake ngwá ọrụ
2.7 Adata flash mbanye mgbake
2.8 Lexar jumpdrive flash mbanye mgbake
2.9 Silicon Ike flash mbanye mgbake
Olee Otú M Pụrụ Naghachi Data si My Lexar JumpDrive Secure II?
M nnọọ wepụrụ m Lexar JumpDrive enweghị ịpị kọmputa m ka ya n'enweghị ẹfep. Ugbu a mgbe m re-jikọọ ya na kọmputa m na-agbalị na-emeghe ya, m ga-esi ihe ọ bụla n'ime. M niile faịlụ na-arahụ. Gịnị ka m kwesịrị ime ka naghachi m faịlụ site na ya?
Ọtụtụ ọrụ-enwe mgbagwoju anya banyere otú iji weghachite furu efu faịlụ site na dijitalụ nchekwa na ngwaọrụ. The ozi ọma bụ na ọ bụrụ na ị na-enwebeghị ọhụrụ data n'ime gị Lexar JumpDrive, ị nwere oké ohere naghachi data site na ya. Dị ka ogologo oge ka ọ pụrụ-ghọtara dị ka a ike mbanye na kọmputa gị, i nwere ike iji a Lexar JumpDrive data mgbake software ka afọ ju gị n'uche.
E nwere nnukwu ichekwa data mgbake mmemme na Internet. Ebe a m ike ikwu na Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac maka gị. Site na iji ya, ị nwere ike effortlessly weghachite n'elu 550 pụrụ iche faịlụ formats, gụnyere videos, ihe oyiyi, audios, ụlọ ọrụ akwụkwọ, ozi ịntanetị na akwụkwọ. Ngwá ọrụ a bụ ike na-agbake data furu efu ruru mberede nhichapụ & formatting, ike okuku, usoro njehie ma ọ bụ nje agha. Ị dị nnọọ mkpa na-eme ụfọdụ clicks ịrụ dum mgbake.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery ugbu a!
Igosi Lexar JumpDrive Iweghachite na 5 Nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1 Run Wondershare Data Recovery na kọmputa gị, ị ga-aba "Ọkachamara Mode". Dị nnọọ pịa "Ekem" ịnọgide.
Nzọụkwụ 2 A nzọụkwụ mkpa ka ị họrọ faịlụ ụdị ị chọrọ iji weghachite. Dị ka ị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru, ị nwekwara ike ịhọrọ "All File iche". Mgbe na-ahọpụta faịlụ na ụdị, pịa "Ekem" ime na.
Nzọụkwụ 3 Ebe ị ga-họrọ a nkebi ka iṅomi maka furu efu faịlụ. Naghachi data si Lexar JumdDrive, ị dị nnọọ mkpa jikọọ ya na gị na kọmputa na họrọ diski ike maka ya, wee pịa "Ekem".
Nzọụkwụ 4 Ugbu a, i nwere ike pịa "Malite" ka iṅomi gị Lexar JumpDrive.
Cheta na: E nwere ihe abụọ nhọrọ egosipụta na interface: "Kwado Deep iṅomi" na "Kwado Raw Iweghachite". "N'ime obi iṅomi"-enyere gị aka naghachi data furu efu ruru formatting, na "Kwado Raw File Iweghachite" na-enyere gị iji weghachite data na ị furu efu ogologo oge gara aga dị iche iche ihe.
Nzọụkwụ 5 Mgbe iṅomi dị n'elu, niile hụrụ faịlụ ga-egosipụta na ụdị faịlụ na ekpe nke window. Ịnwere ike ihuchalu ha ka ha ego otú ọtụtụ gị chọrọ faịlụ nwere ike gbakee.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi" zọpụta ha azụ gị na kọmputa. Biko adịghị azọpụta ha gị JumpDrive ozugbo mgbe mgbake, ma ọ bụ na mgbake nwere ike ada.
Olee otú naghachi faịlụ site USB na USB Iweghachite
Top 5 Free iTunes ndabere extractor
Olee otú ike a buut nkebi maka PC gị
Olee otú Igosi Eye-Fi SD Kaadị Data Recovery
Olee otú Naghachi Photos si Canon PowerShot ELPH 300 HS
> Resource> Naghachi> Lexar JumpDrive Iweghachite: Naghachi Lexar JumpDrive Njikwa na ala